Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Lalao Paranormal: Ny fomba fanao amin'ny mpanjaka telo
by Waylon Jordan March 19, 2020 11,113 hevitra
Tongasoa eto indray amin'ny fidirana vaovao amin'ny Lalao Paranormal amin'ny iHorror. Androany dia manana zavatra ratsy lavitra noho isika isika Lalao Scratch Cat or Varavarana mena, varavarana mavo. Antso io Ny fomba fanao amin'ny mpanjaka telo, ary lalao izay tsy maintsy arahin'ilay lalàna ny taratasiny.
Raha ny marina dia tsy tiako ny miantso azy io ho lalao mihitsy. Fombafomba tokoa io araka ny tiana holazaina amin'ilay anarana. Toy ny ankamaroan'ny lalao toa izao, ny fotony dia maizina indrindra. Ny voalaza voalohany indrindra hitako dia ato Tranonkala CreepyPasta ary Reddit.
Ho fanamarihana, tsy misy ifandraisany amin'ny fombafomba voodoo mitovy anarana io. Karazan-kery hafa miaraka izany, na dia misy aza ny enta-mavesatra izay hampiasainao ao anatin'ny "lalao" dia manondro toetra fombam-pivavahana kokoa.
Fitaovana, fitsipika ary fampitandremana amin'ny lalao Ny fomba fanao amin'ny mpanjaka telo
Ity lisitra ity dia lava ary tafiditra ao ary mila ny singa rehetra ianao raha te hilalao. AZA AOKA EO IZAO.
Efitra mangina lehibe, kokoa raha tsy misy varavarankely. Raha tsy maintsy mampiasa efitrano misy varavarankely ianao dia rakofana mba tsy hisy jiro avy any ivelany hiditra ao amin'ilay efitrano. Ny varavarana dia tokony hanana varavarana izay hanidy sy hihidy tsara ihany koa.
Labozia. Aleo labozia miorina mafy tsy ho may na ho may haingana
Jiro iray. Tsy maintsy mandrehitra labozia ianao, mazava ho azy
Rano kely iray siny sy siny na kaopy madio
Fitaratra roa lehibe
Finday iray feno vola feno
Ny mpiara-miasa atokisanao hanaraka ny lalàna ary handray ny lalao ho zava-dehibe
Zavatra kely mitazona lanja ara-pientanam-po na ara-pientanam-po ho anao
Fametrahana ho an'ny lalao:
Amin'ny 11 alina dia tokony hanomboka hanangana ny Ritual Three Kings ianao.
Ao amin'ny efitranonao voafantina dia apetraho ny iray amin'ireo sezanao manatrika ny Avaratra. Ity ny seza fiandriananao. Apetaho ireo seza roa hafa amin'ny lafiny roa amin'ny seza fiandrianana manatrika azy. Ireo seza ireo dia an'ny Mpanjakavavy sy ny adala ary tokony ho sandan'ny sandry lavitra ny seza fiandrianana no misy azy ireo.
Ataovy azo antoka ny fitaratra iray eo amin'ny sezon'ny Mpanjakavavy ary ny iray eo amin'ny adala, manatrika ny seza fiandrianana indray. Mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, dia tokony ho afaka mahita ny taratrao eo amin'ny manodidina ny fahitanao fa tsy mila mihodina sy mijery ianao.
Apetraho eo anoloan'ny seza fiandrianana ny siny sy ny kapoakanao na ny kapoaka voafantina izay zara raha tratra. Ianao dia mila azy ireo eo akaiky eo raha toa ka mila azy ireo ianao, saingy tsy dia akaiky loatra ka mety hihoatra azy ireo ianao.
Apetraho ao ambadiky ny seza fiandrianana ny mpankafy ary ampodio, fa tsy amin'ny avo. Medium na Low dia tokony ho ampy amin'ny tanjon'ny fombafomba.
Vonoy ny jiro ary avelao ny efitrano hahazoana antoka fa avela hisokatra ny varavarana ary mankeny amin'ny efitranonao.
Apetraho eo akaikin'ny fandriana ny findainao, labozia ary jiro mba hahafahanao manatona azy ireo mora foana nefa tsy mila mihaza azy ireo. Mba hahazoana antoka fa feno tanteraka ny telefaona dia avelako eo amin'ny charger fotsiny izy io. Apetraho amin'ny 3:30 maraina ny famantaranandronao.
Raiso ny zavatra nofidianao ary mandehana ao am-pandriana. Fotoana hatory hiomanana amin'izay ho avy.
Mitantana ny fombafomba amin'ny mpanjaka telo
Rehefa maty ny famantaranandronao amin'ny 3:30 maraina, miala eo am-pandriana, dory ny labozia ary raiso ny telefaoninao. Tazomy miaraka aminao mandrakariva ny zavatra ara-pientanam-po anao.
Ianao dia manana telo minitra hiverina any amin'ny efitranonao voaomana.
Rehefa miditra ny efitrano ianao dia akatona ny varavarana aorianao. Ny namanao voafidy amin'ity fombafomba ity dia tokony hiandry eo ivelan'ny efitrano ary hangina araka izay azo atao.
Arovy ny lelanao labozia, makà ny seza fiandriananao. Ny vatanao dia tokony hanakana ny rivotra avy amin'ny mpankafy ao aorianao ary hiaro azy tsy handoro ny labozia. Ny hevitra eto dia ny hoe, raha mianjera amin'ny sisiny ianao mandritra ny fotoananao ao amin'ny efitrano, dia hovonoin'ny mpankafy mamarana ny fombafomba ny lelafo.
AZA, NA INDRINDRA AZA, AZA MITANDRINA AMIN'NY MPAMORITRA EO ANAREO !! Miezaha ihany koa mba tsy hibanjina mivantana ny lelafo.
Raha heverina fa nahatratra ny seza fiandriananao tamin'ny 3:33 maraina ianao ary efa mandeha araka ny drafitra rehetra, dia azonao atao izao manomboka ny ampahany mavitrika amin'ny fombafomba amin'ny fametrahana fanontaniana mafy. Mety mila fotoana izany, nefa averiko indray, raha heverinao fa nanao ny zava-drehetra tsara ianao, dia hanatevin-daharana anao ireo Mpanjaka izay hamaly ny fanontanianao.
Raha ny voalaza, dia maheno ny feon'izy ireo ianao, saingy tadidio, na manaitra izaitsizy izy na tsy milamina, aza mitodika mijery ireo fitaratra.
Aza adino ny mandray am-pahamatorana an'ity. Tsy fotoana tokony hametrahana fanontaniana adaladala ity – na inona na inona henonao henony teo aloha, eny misy tokoa izy ireo. Manana adiny iray miaraka amin'ireo Mpanjaka ianao hanontany izay tianao. Miomàna amin'ny valiny mety tsy tianao, ary miomàna amin'ny fanontaniana ho valin'ny fanontanianao.
Farany, aza avela ho faty mandritra ny fotoam-pivorianao ny labozia.
Amin'ny 4:34 maraina dia tokony hiantso anao ny namanao izay eny am-baravarana fa tapitra ny lalao. Raha tsy mamaly ianao dia tokony hiezaka ny hiantso ny findainao izy ireo. Raha toa ka tsy mahomby amin'ny fisintonana ny sain'ireto fomba ireto dia tokony hiditra ao amin'ny efitrano izy ireo hanandrana sy hamoaka anao amin'ny fombafomba amin'ny fiantsoana ny anaranao, saingy tsy tokony hikasika anao izy ireo amin'ny toe-javatra rehetra. Ary farany, raha tsy mandeha izany dia tokony hampiasain'izy ireo ny mug hanipy rano amin'ny siny eo amin'ny tavanao.
Raha sendra ao anaty fanjakana tsy mahatsiaro tena ianao ary tonga ny fotoana hiverenana, mifantoha amin'ilay entana manokana izay nentinao ary avelao hitarika anao hiverina amin'ny fanjakana mifoha izy io. Mety ho toa anao tsy misy dikany izany, fa raha nanolo-tena tamin'ny fombafomba ianao hatreto, dia tsy dia lehibe loatra ny fisainan'ny saina.
Raha vantany vao fantatrao fa tapitra ny ora ho an'ny fombafomba dia tokony hitsangana ianao, hitsoka ny labozia ary hiala ny efitrano mba hanondroana ny fanidiana.
Raha tsy mifoha amin'ny 3:30 maraina ianao dia aza manohy.
Raha miverina ao amin'ny efitranonao voaomana ianao ka mahita ny varavarana mihidy, aza manohy ary avelao ny trano hitondra ny olona rehetra miaraka aminao. Aza miverina alohan'ny 6:00 maraina.
Raha maty ny mpankafy na tsy miasa amin'ny lafiny sasany intsony dia aza manohy ary avelao ny trano hitondra ny olona rehetra miaraka aminao. Aza miverina alohan'ny 6:00 maraina.
Aza avela ho faty ny labozinao alohan'ny fahavitan'ny fombafomba.
Averina indray, araka ny voalaza tetsy ambony, aza mijery mivantana ireo fitaratra roa ireo. Voalaza fa ny zavatra hitanao any dia mety hisarika ny fahatsiarovanao ao anatiny ary mety ho voafandriky ny Mpanjaka ianao.
Aza miala amin'ny seza fiandriananao alohan'ny 4:34 maraina.
Aza miditra amin'ity fombafomba ity manambola na tsy manaja. Tsy hifarana tsara ho anao na ho an'ny mpiara-mitory aminao izany.
Amin'ireo lalao rehetra nandrakofanay an'ity andiany ity hatreto, io no lavitra indrindra raha ny marina, satria misy ifandraisany amin'ny fombafomba sy ny fiantsoana fanahy. Ireo elanelam-potoana manokana ireo, mitazona labozia mirehitra mandritra ny adiny iray koa ianao, ka ahiana may ihany koa.
Hamarino tsara fa zavatra tena tianao hatao izany alohan'ny itondranao ny Ritualy mpanjaka telo.
Jereo ny Cateories Select Category4K UHD (18)Amazon (sarimihetsika) (11)Amazon (andiany) (12)AppleTV + (6)Blu Rays (38)Horohoro amin'ny hatsikana (51)Tantara an-tsary (16)Zavatra tsara hividianana (55)Cool Stuff tokony hatao (9)Krismasy mampatahotra (2)Disney+ (série) (1)Editorial (1)Vaovao momba ny fialamboly (17)Facebook (andiany) (1)Angano (49)Rakitra hita (28)Mampihomehy (1)Lalao (220)Gore (26)Halloween (3)Haunts (6)HBO (andiany) (9)Boky mahatsiravina (69)Vaovao momba ny fialam-boly mahatsiravina (11,359)Horror Series (159)Subgenres mahatsiravina (18)Hulu (andiany) (7)Resadresaka nifanaovana (sarimihetsika) (48)Resadresaka nifanaovana (andiany) (6)Horohoro LGBTQ (43)Lisitry (sarimihetsika) (46)Lisitry (andiany) (2)Tsena (22)Monster Horror (11)Sarimihetsika (3)Hevitra momba ny sarimihetsika (87)Sarimihetsika (518)Mozika (44)Netflix (sarimihetsika) (38)Netflix (andiany) (64)Tsy angano (5)Paranormal (78)Fampihorohoroana ara-tsaina (mampientanentana) (55)Sci-Fi (2)Andiany (1)Famerenana andian-dahatsoratra (10)Sarimihetsika fohy (2)Fotoana fampisehoana (andian-dahatsoratra) (1)Shudder (sarimihetsika) (61)Shudder (andiany) (20)Slasher (6)Hafahafa sy tsy mahazatra (42)Streaming Series (51)Streaming Series (2)Kilalao (8)Tranofiara (3)Trailer (lalao) (1)Tranofiara (sarimihetsika) (388)Tranofiara (andiany) (51)Heloka tena izy (51)TV (8)VOD (1)VR (1)YouTube (2)YouTube (sarimihetsika) (5)YouTube (andiany) (13)Zombies (1)
Sundance 2022: 'Master' manenona tranonkala tsy mazava
Ny 'The Cuphead Show' an'ny Netflix dia miatrika ny Devoly amin'ny ...
'Fight Club' sy 'The Rocky Horror Picture Show's'...
Ny afisy 'Evil Dead Rise' dia manome famantarana lehibe momba ny...